Amazwe - TPAN - I-World March
Amazwe - TPAN
Ikhaya » Amazwe - TPAN
ISivumelwano Sokuvinjelwa kwezikhali zeNyukliya
I 7 Julayi 2017, ngemva kweminyaka eyishumi umsebenzi by ICAN kanye nabalingani bayo, i Abaningi kakhulu emazweni omhlaba yokutholwa isivumelwano eyingqopha global lokuvala zenuzi, eyayaziwa ngokomthetho ngokuthi iSivumelwano phezu Ukwenqatshelwa Nuclear Izikhali . Izofika emthethweni ngokomthetho lapho amazwe we-50 asayine futhi ayamukela.
Isimo esikhona njengamanje ukuthi kukhona ama-83 asayine kanye ne-50 nawo avumile. Sinciphisa i-0 yokusebenzisa amandla, ekufinyeleleni isamba.
Umbhalo ogcwele wesivumelwano
Isimo sesignesha / ukuqinisekiswa
Ngaphambi kwalesi sivumelwano, izikhali zenuzi kwakungamadodana izikhali kuphela uyaca bekungenjalo kuncike ukuvinjelwa Imininingwane (uma izikhali zamakhemikhali bacteriological) naphezu kwemiphumela yabo inhlekelele zezenhlalakahle kanye nezemvelo eyisikhathi eside. Isivumelwano esisha sigcwalisa igebe elikhulu emthethweni wamazwe ngamazwe.
Unqabela izizwe ukuthuthukisa, ukuhlola ukukhiqiza, ukukhiqiza, ukudluliswa, ifa, esitolo, ukusetshenziswa noma ukusongela ukusebenzisa izikhali zenuzi, noma uvumele zenuzi insimu yayo upakile. They noma nqatshelwe ukusiza, ukukhuthaza noma ukubanga ubani ukuba bahlanganyele kunoma yiluphi yale misebenzi.
Isizwe esinezikhali zenuzi singakwazi ukujoyina lesi sivumelwano, uma nje sivuma ukuwabhubhisa ngokuhambisana nomthetho obopha ngokomthetho futhi ohambisana nesikhathi. Ngendlela efanayo, isizwe esibamba izikhali zenuzi zenye isizwe ensimini yaso singajoyina, uma nje sivuma ukuyiqeda esikhathini esithile.
Izizwe zibophezelekile ukuhlinzeka usizo kuzo zonke izisulu zokusetshenziswa nokuhlolwa kwezikhali zenuzi nokuthatha izinyathelo zokulungiswa kwezimo ezingcolile. Lesi sandulela siyabona umonakalo ohluphekile ngenxa yezikhali zenuzi, kuhlanganise nomthelela ongavumelani kwabesifazane namantombazane, nakubantu bomdabu emhlabeni jikelele.
Lesi sivumelwano ukuthi okuxoxiswene ekomkhulu-United Nations e-New York ngo-March, June nango-July 2017, iqhaza ezingaphezu kuka 135 amazwe amalunga womphakathi. I-20 September 2017 ivulwe ukuze isayinwe. Kuyinto engunaphakade futhi izobophezela ngokomthetho izizwe ezizijoyina.
Ukubambisana ukuze i-TPAN iqale kungenye yezinto eziza kuqala ku-World March for Peace and Nonviolence.
Idokhumenti yesignesha noma ukuqinisekiswa